Thola ongakubona eSegura de la Sierra | Izindaba Zokuhamba
I-Segura de la Sierra
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, España, General
Kutholakala ku- isifundazwe saseJaén, iSegura de la Sierra Kuyingxenye yesifunda saseSierra de Segura, ngaphakathi kweSierras de Cazorla, Segura naseLas Villas Natural Park. Lokhu sekuvele kusinikeza umbono omncane wakho konke esingakuthola kule ndawo, kusuka kumathafa emvelo amahle kuya emizileni eminingi yokuhamba izintaba nasemadolobheni amahle ase-Andalusian.
Lesi sizwe sikhona enkabeni yezintaba, amakhilomitha ayi-174 ukusuka edolobheni laseJaén, ukuze ukwazi ukujabulela ezokuvakasha ezinhle zasemakhaya. Ukuthula nezikhala zemvelo yikho okuheha abantu kakhulu, kepha eSegura de la Sierra banamagugu amaningi abangawakhombisa.
1 Indawo yomlando
2 Inqaba yaseSegura de la Sierra
3 ISonto Lethu Lady of the Collado
4 Indlu kaJorge Manrique
5 Amabhati ama-Arab
6 Umthombo Wombuso
ISegura de la Sierra ingabonakala njengendawo ekude kakhulu namadolobha amakhulu, ngakho-ke singacabanga ukuthi bekungekho bantu kuze kube muva nje. Kepha iqiniso ukuthi le ndawo inomlando omningi. Lezi zintaba zazivele zaziwa amaGreki, ayezibiza ngokuthi i-Orospeda. Le ndawo nayo ibonile izimpi phakathi kwamaRoma nabaseCarthage kwathi ngokuhamba kwesikhathi le ndawo yabuswa ama-Arabhu, lapho ifinyelela inkathi yayo enkulu kakhulu yobukhazikhazi. Siyazi ukuthi kamuva kwahlalwa ngamaKrestu, enikezwa ngu-Alfonso VII ku-Order of Santiago. Ngekhulu le-XNUMX leli dolobha laze lavakashelwa yiNkosi uCarlos I. Kakade ngekhulu le-XNUMX ngokuhlaselwa kukaNapoleon, ingxenye enkulu yabantu, izinqolobane zayo nomlando wayo kwasha, yingakho okuningi kungaziwa. Yize, njengoba sikwazile ukuqinisekisa, bekuhlale kuyindawo yamasu.
Inqaba yaseSegura de la Sierra
Lesi sigodlo, okungenye yezinto esingazibona kalula eSegura de la Sierra buqamama, sakhiwa ngamaSulumane, yize kucatshangwa ukuthi kamuva yalungiswa yi-Order yaseSantiago. Emakhulwini eminyaka le nqaba enkulu yashiywa, yize ngeminyaka engamashumi ayisithupha inkathi yokwakhiwa kabusha yaqala ukuyibona njengoba injalo namuhla. Umnyango wale nqaba ungumbhoshongo wekhulu le-18. Indawo yokubukisa yayiyindawo esebenzayo kakhulu futhi inezinye izakhiwo, kanye nebhikawozi nomgodi wokuqoqa amanzi emvula. Lokhu kwaziwa kusukela kwizichasiselo ezisencwadini ye-Order of Santiago. ITorre del Homenaje ingelinye lamaphuzu avelele kakhulu enqabeni, enamamitha angaphezu kuka-XNUMX ukuphakama akhiwe ngamatshe nezitini. Inezitezi ezintathu nethala, lapho uthola khona ukubukwa okuhle kwezintaba. Enqabeni ungabona futhi indawo yokuphenya, indawo okucatshangwa ukuthi nayo bekuyigumbi lokudlela, indlela yokuhamba okuyindlela yasogwini yezinjongo zokuzivikela kanye nesonto elidalwe yi-Order of Santiago.
ISonto Lethu Lady of the Collado
Kukholakala ukuthi leli bandla selivele linomsuka wamaRoma, kepha alaziwa impela kwazise ngekhulu le-XNUMX lashiswa ngokuphelele ngamasosha kaNapoleon kwadingeka lakhiwe kabusha. Ngakho-ke isakhiwo esingabonakala namuhla sivela kuleli khulu leminyaka. Ngaphakathi esontweni kunamasonto amathathu anezithombe ezithwebula izithombe futhi kukhona nokuqoshwa kwe-Virgen de la Peña, enenani elikhulu, njengoba kucatshangwa ukuthi kusukela ngekhulu le-XNUMX, ingelinye lamadala kunawo wonke esifundazweni. Ukusuka ngaphandle, umbhoshongo wawo wokwakha izakhiwo ungadonsela ukunaka kwethu.
Indlu kaJorge Manrique
UJorge Manrique, isicukuthwane saseCastilian kanye nembongi evela ku-pre-Renaissance ungomunye wabalingiswa ababaluleke kakhulu kuleli dolobha. Yize kungaziwa ukuthi wazalelwa lapha ngempela yini kodwa iqiniso ukuthi Indlu enkulu yomndeni ibiseSegura de la Sierra. Namuhla indlu yakhe iyaqhubeka nokuba yisibonelo sezakhiwo zomphakathi zekhulu le-XNUMX. Ikhothamo eliyindilinga elihlotshiswe ngama-motifs ezitshalo livela ku-façade yalo. Phezulu ungabona ingubo yezingalo ze-Figueroa, umndeni womama bakaJorge, kanye nesiphambano saseSantiago, ngoba ubaba wakhe wayengowe-Order of Santiago.
Lokhu okunye ukuvakashelwa okuyimpoqo eSegura de la Sierra. Ama-Arabhu ayenamasiko athile okuhlanzeka awaletha ePeninsula, ngakho-ke nanamuhla asenjalo singathola izindawo zokugeza ezidumile zama-Arabhu. Lezi zindawo zokugezela ziphefumulelwe amaRoma kepha zisebenzisa umusi omningi, negumbi elibandayo negumbi elishisayo. Ukwehla ngomgwaqo wesonto singathola lawa mabhavu amadala anemengamo ephindwe kabili yamahhashi kanye nomphongolo wesici.
Phambi kwesonto kukhona uMthombo Wasebukhosini odumile. Umthombo wekhulu le-XNUMX ositshela ngokushintshwa kusuka ku-Renaissance kuya kumaGothic. Kuyo ungabona isihlangu esikhulu esiqoshwe izingalo zikaCarlos V.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » I-Segura de la Sierra